Maxaa Koonfur Galbeed looga reebay Qoraalka Ra’iisal wasaare Rooble u kala diray Maamul Goboleedyada..? | Somalia News
Maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa laga reebay qoraal uu Ra’iisal wasaaraha Soomaaliya u kala diray maamul Goboleedyada Dalka.
Qoraalka ayaa ku socday madaxweynayaasha Dowlad Goboleedyada Puntland, Jubaland, Hirsahbeelle iyo Galmudug, waxaana la ogeysiiyay Madaxweyne Farmaajo, iyadoo looga dalbaday soo gudbinta magacyada Xubnaha Guddiga Doorashooyinka Heer Federaal iyo Heer dowlad Goboleed iyo waliba Guddiga xalinta khilaafaadka.
Madaxweynaha K/Galbeed C/casiis Xasan Maxamed Lafta-gareen ayaa la sheegay inuu gudbiyey magacyada liiska 4 xubnood xubnood oo ka mid noqonaya labada Guddi ee Doorashooyinka heer federaal iyo Guddiga xalinta khilaafaadka, iyadoo uu noqday maamulka kaliya ee tallaabadaasi qaaday, iyadoo waqtiga loo qabtay uu ku eg yahay 20/10/2020.
Previous articleEthiopia approved by Somalia to bring in khat, Kenya remains banned- airport official
Next articleMaxkamadda Gobolka Maroodi-jeex Oo Xukun Ku Ridey 7 Nin oo Kufsi u Gaystay Gabadh yar